ကျွန်တော်တို့မောင်နှမတွေအဲ့အိမ်ကြီးမှာနေရတာပျော်တယ်ဗျာ..တစ်ခါတစ်ခါ ကျနော်တို့နဲ့ ရန်သူဖြစ်တဲ့ အမွှေးစုတ်ဖွားအကောင်ကြီးနဲ့တူတူပုန်းတန်းကစားရတယ်..စိန်ပြေးလိုက်တန်းကစားရတယ်
ကျွန်တော်ခေါင်းနဲနဲမူးနေတယ်ဗျာ..သူတို့ကျွန်တော့ကိုဖျန်းထားတဲ့အနံ့တွေကြောင့်နေမယ်ကျွန်တော် တ်ာတော်နဲ့လမ်းလျှောက်လို့မရဘူး..ခေါင်းကမိုက်ခနဲ့မူးမူးနေလို့..ဒါနဲ့အဲ့ဒီနားမှာပဲခနနေပြီးအိမ်ပြန်လမ်းကိုကြိုးစားရှာမယ်ပေါ့.. ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့တွေပြန်ပြီးညီလေးနဲ့ညီမလေးကိုဘာလုပ်ဦးမလဲဆိုပြီး အရမ်းကိုစိုးရိမ်နေရတယ်.. ကျွန်တောအဲ့လိုနဲ့နေနေတယ်ဗျာ….အဲ့နာမှာလေကောင်းလေသန့်လေးရှူရင်းအမူးလဲဖြေရင်း
အဖေနဲ့အမေကို ရှာဖို့ဆိုတာကလည်း မလွယ်ပေမဲ့ ကျနော်ကြိုးစားရှာရမှာပေါ့လေ.. ကျနော့်မှာ ညီနဲ့ညီမလေးရှိတယ်.. ကျနော်တို့သုံးယောက် အတူ ဘဝကို ရှေ့ဆက်ဖို့ကြိုးစားရမှာပေါ့လေ။။ကျနော် တွေးနေမိတာကတော့..
ဒါဟာ ဘဝ တစ်ခု အဆုံးသတ်ခြင်းနဲ့ အသစ်တစ်ခု စတင်ခြင်းလို့ပဲထင်ပါတယ်.. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကြိုးစားပီးရှေ့ဆက်ရမှာပေါလေ..
P.S .. ကျနော်မရေးပါဘူး.. အနော့် မ ရေးထားတာကို တင်ပေးချင်းသာ ဖြစ်သည်..
Posted by ကိုထွဋ် at Saturday, November 10, 2012
လက်စသတ်တော့ ကြွက်ကိုးး)
ခပ်ပေါပေါ တစ်ကောင်ပါပဲ.. ရေးချင်တာတွေရေးတယ်.. ပြောချင်တာတွေပြောတယ်.. ၂၀ကျော် ငပေါ တစ်ကောင်ပါ.. ဆက်သွယ်ရန် jamiehtut@gmail.com
စာများလိုက်ဖတ်ပါသော်လည်း အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ကောမန့်မချန်နိုင်ခဲ့သည်ကို ခွင့်လွှတ်ပါ ခင်ညာ...
အစွန့်ပစ်ခံသူတစ်ယောက်ရဲ့အတ္ထုပတ္တိ ကျွန်တော့မှာမွေးချင်းလေးယောက်ရှိတယ် .. ကွန်တော့အထက်မှာအကိုအကြီးတစ်ယောက်အောက်မှာညီတစ်ယောက်ညီမလေးတစ်...
ခေါင်းစဉ်ကို ကြည့်တာနဲ့ ခင်ဗျားတို့ စိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုတာ ကျုပ်သိတယ်။ ခင်ဗျားတို့ အွန်လိုင်းမှာ “အဆီချနည်း” “ဝိတ်ချနည်း” ဆိုပြီးရှာပီးပီ။ အဆင်မ...
ပျိုမေတို့ လက်ရှိသုံးနေတဲ့ အလှကုန်တွေအများစု ငှက်ပျောသီးနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ အလှကုန်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ငှက်ပျောသီးဟာ အသားအရေ အတွက် အကျိုးရှိ...
ဘလော့မရေးတာလဲ ကြာပေါ့.. ကြာပေါ့ဆို.. အလုပ်များတယ်.. အလုပ်နဲတဲ့အချိန်မှာ အလုပ်ပြောင်းတယ်.. အခု လက်ရှိ အလုပ်ကလဲ အထိုင်မကျတော့ အင်တာနက်လဲ မသုံး...
ဟိုတစ်နေ့က လက်သည်းညှပ်နေတုန်း လက်သူကြွယ်မှာ လက်သည်းပွင့်နေတော့ ဘာဖြစ်မလဲလို့ သိချင်တာနဲ့ရှာလိုက်တာ အောက်ကအဟောတွေ ရလာတော့တာပဲ။ လက်သည်းအဟေ...
ကော်ပီ = တစ်စုံတစ်ရာအား ပုံတူကူးချခြင်း ကျနော် ကော်ပီ ဆိုတဲ့စကားလုံးကို သိခါစက အသက်ကငယ်ငယ်ပဲရှိဦးမယ်.. စသိတာကတော့ အိပ်ဘေးက “မိတ္တူကူးသည်”...
မန်သလားမမေးနဲ့ .. ကန်ထရိုက်တာနှစ်ဦးအကြွားပြိုင်နေကြသည်။ ပ-ကန်ထရိုက် ။ ။ ငါတို့ ကန်ထရိုက်အဖွဲ့နဲ့ဆောက်ရင် တိုက်တစ်လုံးဟာ (7)ရက်နဲ့ပြီးတယ်...
နေ့လည်ကလဲ ပူလို့အိပ်မရဘူး ။ အဲဒါနဲ့ ညကျတော့ မိုးရွာလို့ စောစောအိပ်တယ်။အေးသွားတာပဲလေ။ အိပ်ပျော်တာနဲ့ အိမ်မက်မက်တော့တာပဲ ။ အံမယ် ကျနော် ရောက်ေ...
၁ ရက်နေ့ည ကားတိုက်မှု မနေ့ညက ကားတိုက်မှုမှာ နိုင်ငံခြားသား ခုနှစ်ယောက် အပြင်းအထန် ဒဏ်ရာရရှိကြောင်းသိရပါတယ်။ ကားတိုက်မှုက တနလာင်္နေ့ မနက်အစောပို...
သူမသည် ဤအခန်းတွင်နေသည်မှာ ကြာလေပီ။ သူမအား မည်သို့ပင် ဖယ်ခိုင်းခိုင်း သူမ မသွားချေ။ သူမသည် ဤအခန်းကိုချစ်သည်။ သူမသည် ဤအခန်းကို မည်သူမှလာနေမည်က...
COUNTER HIT, Casino online, Mt4, Mecca, NOBEL CASINO
ကိုထွဋ်. Simple theme. Theme images by gaffera. Powered by Blogger.